स्वयम्वरिसंह लामा, (दोहा, कतार)
देशमा संकटकालको अवस्था थियो । तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्ष बीच तकडा टकराव परि रहेको अवस्था । सदरमुकामको विद्यालयहरु घटस्थापनाको दिन देखि बन्द भयो । म मेरो छोरा उपदेश दाईको � ुलो छोरा रेन्जेन र उनको सानो भाई ग्याल्बोलाई लिएर गाउँमा दशैं मान्नको लागि घर जान तयारी भयौं । घर जाँदै गर्दा धेरै बर्ष पहिले नै छुटेर हाती सुँढे लखन्तीमा घरबार जमाएर बसेका जे� ो दाईको घरमा गएर दशैंको शुभकामना बाँडेर मात्रै मुल घरमा जाने विचार ग-यौं ।
डेरा बाट निस्कँदा निकै अबेर भै सकेको थियो । त्यसैले पैदल नहिडेर बर्दिवास जाने बस चढ्दै लालबन्दी सम्म जाने निश्कर्षमा आयौं । ुकाम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी � िमी तिरु भने झैं आफ्नो घरको दिशालाई � िक पछाडी पारेर हामी बसमा चढ्यौँ । बाटोमा कम्ब्याट् लगाएका फौजीहरु जताततै देखिन्थे । कतै त लामो कपाल पालेका गोल्डस्टार जुता लगाएको साधा पोसाकमा बन्दुक बोकेका सरकार पक्षको हो कि विद्रोही पक्षको हो छुट्टयाउनै नसक्ने समुहहरु देखिन्थे ।
हामी जाँदा जाँदै बाटोको धेरै � ाउँहरुमा सुरक्षा जाँचका लागि बस बाट ओर्लन प-यो । भिमानको जंगल नकट्दै घाम पश्चिम तिर ढल्किँदै थियो । ती अबोध बालक र दुई किशोरहरुलाई साथमा लिएर दाईको घर सम्मको यात्रा गर्न त्यो दिन असंभव भै सकेको थियो । बालबच्चाहरुलाई रातको समयमा हिडाउनु त्यसै पनि राम्रो हुँदैन त्यहि माथी पनि जताततै खतराको समय थियो ।
त्यसैले हामी बर्दिवासमा आईपुगे पछि पूर्व बाट आएको भैरहवाको बसमा चढेर लालबन्दी सम्म गयौं । त्यहाँ पुग्दा दिउँसोको साँढे तीन बजि सकेको रहेछ । बालकहरुलाई भोकै हिडाउनु � िक लागेन र एउटा गेष्टहाउसको मालिकले चलाएको रेष्टुराँमा गएर केहि नास्ता ग-यौं । ग्याल्बोलाई बसमा चढ्दा उल्टी भएकोले उसले केहि खाना मानेन ।
केहि पानी र बिस्केटहरु झोलामा कोचेर हामी त्यहाँ बाट चारकोषे झाडीको बाटो तर्फ लम्कियौं । उपदेश र रेन्जेन आ आफ्नो ब्याग बोकेर अघि अघि गए । ग्याल्बोले मेरो हातको औंला समाएर म संग संगै स-सानो पाईलाहरु छिट्टो-छिट्टो चाल्दै हिरापुर पत्थरकोट हुँदै लखन्तीको झोरा भित्र प्रवेश गर्न लाग्दा बेलुकाको पाँच बजि सकेको थियो । बेला बेलामा शसस्त्र समुहहरु भेट हुन्थ्यो किन यति राती हिडेको कहाँ जान लागेको कहाँ बाट आएको नाम के हो झोलामा के छ आदीईत्यादी प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अघि बढ्नु पथ्र्यो । टाढा-टाढा कता कता डाङ डुङ केहि पड्केका आवाजहरु पनि सुनिन्थ्यो । पत्थरकोट देखि झोरा प्रवेश पछि हामीले चिया नास्ता खाने � ाउँ पाउने थिएन । त्यसैले हतारमा केटाहरुलाई एक-एक कप तातो दुध पिलाएर पुनः यात्रा जारी राख्यौं । साँझखप खोलाको चिसो सिरेटो चल्न थाल्यो ।
हामी झन् झन् अँध्यारो जंगलको खोल्सा भित्र जाँदै थियौं । त्यतिन्जेल सम्ममा झमक्क साँझ परि सकेको थियो । सुनसान बगरको बालुवामा जति अगाडी बढे पनि त्यहिँको त्यहिँ । ग्याल्बोले मेरो दयाँ हातको चौर औंला समातेर संग संगै दौडी रहेका थिए । अब जति जति रात बड्दै गयो त्यति त्यति हामी घना जंगल तिर भासिँदै थियौं । त्यकिैमा मेरो पाईटको पछाडी खल्तीमा केहि हल्कापन महसुस् भयौ छामे गोजी रित्तो थियो । अरे मेरो वालेट पैसाको ब्याग खै ! सबै जना झस्के । केटाहरु चुपचाप म तिर फर्केर हेरि र-यो । झोलामा छामे थिएन । अघि दुधको पैसा तिरेको बेलामा त्यहि छोडे छु । साउदी बाट जे� ादाईको छोराले प� ाएको पैसा पु-याउन जान लागेको त्यहि गायब । लौ अब वित्याँस् ।
मानव वस्ती धेरै टाढा थियो । अँध्यारा जंगल बाट स्याल ब्वाँसो भालु लगायत अन्य जनावरहरु कराउन थालेको थियो । हामी लोक कथाका पात्र जस्तै भयौं । � ्याक्कै राजकुमार दिक्पालको कथा जस्तै । जति जंगल भित्र गए पनि डाङ डुङ आवज सुन्थे । कस्तो आपत् । बीच जंगलमा आएर वालेट हराएको थाह भो । सबै फर्केर जाउँ त्यति लामो बाटो । म एक्लै जाउँ बालबच्चाहरु जंगलमा कसरी छोडेर जाने ।
म पनि कस्तो हुस्सु । कस्तो ख्याल नगरेको ? अब यो विपती कसरी टार्ने ? भोली विहान जाउँ त अरुले भेट्टाई सक्छ । पक्कै पनि त्यहि झरेको हुनु पर्छ । अँध्यारोमा कसैले भेटेको छैन होला । म जान्छु । तिमीहरु पनि जान्छौ कि के गर्छौ उनीहरुको आशय बुझ्ने प्रयास गरेँ । "आऽऽऽ अंकल म त हिड्न सक्दिन अब । तपाई गएर आउनुस् हामी तीन जना यहिँ बसि रहन्छौ ।" उमेरले १५ बर्ष प्रवेश गरेको � िटो उसलाई त सायद डर लाग्दैन क्यारे जस्तो लाग्यो । तर उपदेश र ग्याल्बो देखि मलाई धेरै टि�्लाग्न थाल्यो ।
'म हावाको गतीमा हुँईकेर आउछु तिमीहरु नडराई बस है' भनि मुल बाटो छलाएर एउटा सानो अँध्यारो खोल्सामा चुपचाप बस है भने । दाउरा बटुलेर आगो बाली राखौं कि जस्तो पनि लागेको थियो तर यसो गर्नु पनि खतरा थियो । आगो बाल्ने वितिकै गोली वा बम बारुदको बर्षा हुन बेर लाउथेन । हामी अचानक त्यस विपतीमा फस्न पुगेका थियौं । खोलाको चिसो सिरेटोले अझ तीव्र बेग लिन थाले । कान चिसो भयो । वारीपारीका जंगलहरु थर्काएर कराएका स्यालका हुँईयाँहरुले खतराको संकेत जनाई रहेका थिए । अब हुट्टिट्याउले पनि हाम्रो टाउको � ुङला झैं गरि आफ्नो राज जनाउदै थियो । वातावरणले साँच्चै नै सन्नाटा छायो ।
मलाई ग्याल्बोको धेरै पीर लाग्यो । १४ बर्षमा प्रवेश गरेका मेरो छोरा उपदेश केहि नबोली रेन्जेन संग उभी रहेको थियो । मैले ढिलो गर्नु उचीत् लागेन । ग्याल्बोलाई रेन्जनको काखीमा जिम्मा लगाई दुई पाईला मात्रै चालेर फर्किदा नाबालक ग्याल्बोले रुन्चे स्वरमा 'अंकल फल्केल आउनुस् है मलाई कस्तो डल लागी ला छ ।' भने पछि हस् भनि मनलाई क� ोर बनाई म अँध्यारोलाई चिर्दै तुफानको गतिमा फर्केर गएँ । बाटै भरि ग्याल्बोको अनुहारमात्र देखी रहेँ । करीब आधा घण्टाको म्याराथुन दौड पछि बल्ल अघिको चिया पसलमा पुगेँ । चिया पसले पसल बन्द गरि घरमा गैसके छ । मैले झोला बिसाएको � ाउँमा छामछुम गरि वालेट खोजेँ । केही भेट्न सकेन । त्यतिकैमा छाप्रो पछाडीबाट घारीभित्र भ्वासाङसाङको � ूलो आवाज निकाल्दै � ुलो साँढे दौडेर म भए तिर आए जस्तो लाग्यो । म आतिएर कराउनु पुगेछु तर मेरो आवाजै अचानक डरले बन्द भयो ।
अब म बाँच्ने आशामा थिएन । चिया पसलको छाप्रोको खाँबोलाई एउटा हातले समाएर भुईमा थचक्क बसेँ । छाप्रो निकै बेरसम्म कामिरहेको जस्तो लाग्यो । म अझै कराउन खोजी रहेको रहेछु तर आवाज निस्की रहेको थिएन । मैले अब वालेट खोज्ने साहस गरिनँ । त्यहाँ बाट चलमल पनि गर्न सकिनँ । निकै बेर त्यहीँ कुप्रेर बसे पछि पो पर डाँडामा केहि नारी र पुरुष आवाजमा गुनगुन कुरा गरेको सुनेँ । एकै क्षणमा आगोको मुस्लोका साथ डडाङ डुडुङ गर्दै बन्दुक पड्क्यो । छापामारहरुको तालीम केन्द्र रहेछ क्यार यो जंगलमा भन्ने सोँचे त्यस पछि जंगली जनावरको डर भने म बाट हरायो । मैले फेरी वालेट खोज्ने प्रयास गरेँ ।
अँध्यारोमा छाम्दै गर्दा मैले केहि बस्तु फेला परे त्यो मेरो वालेट नै हो भन्ने पक्का भयो । हातले भित्रको पैसा छामेँ । सबै छ जस्तो लाग्यो । दाहिने हातमा पोको पारेर बेस्सरी कुदेर गएँ । बाटो नै � म्याउन नसक्ने गरि अँध्यारो रात थियो । बाटो किनारामा कुहेर फोक्सो भैसकेको जामुनाको � ुटो टल्की रहेको थियो । त्यसैलाई भाँचेर बाटो पहिल्याउने राँकोको रुपमा प्रयोग गर्दै अघि बढेँ । बालबच्चाहरु भएको � ाउँमा पुग्दा त्यहाँ कोही पनि थिएन । मेरो स्वरले बोलाउन सक्दैन थियो । अरु भन्दा ग्याल्बो त्रस्त थियो । बाल मस्तिक्स्मा कहिल्यै नमेटिने गरि युद्धको त्रास बसि सकेको थियो । मेरो जस्तो छिपिएको मानसिकतामा त युद्धको कसर बाँकी छ भने ग्याल्बो जस्तो नाबालकको दिमागमा कस्तो असर पारेको होला म झन त्रस्त हुँदै उनीहरुलाई कालो रातभित्र वालेट खोजे झैं गरि खोज्न थालेँ । रुन र कराउन थालेँ । यतिकैमा बिउँझे छु । ओहो कस्तो भयानक सपना ।